Chivabvu 16, 2018 arun
New blockchain ETF anotangazve musi NYSE
A itsva blockchain Exchange-mhindu Fund raparurwa neChitatu pamusoro New York Stock Exchange.
The ETF (BKC) akabata anogoverana ose 32 Makambani tichishanda cryptocurrencies kana ravo zvisiri pachena blockchain michina. The ETF iri chomurume Rex Anotiudza uye aishingaira neKomisheni Brian Kelly, mumwe CNBC Contributor uye musoro BKCM, iyo anomhanyira digital zvinhu nzira kuti vatengi.
The mari Anotiwo anogoverana pamusoro Square uye chipmaker Advanced Micro namano.
French rezvemari anoti ari vaneshungu pamusoro cryptos
The French Finance Minister, Bruno Le Maire, rava kupfuura mukuru European mukuru kuti ndisingambovanzi rutsigiro crypto sezvaakaparidzira nzvimbo ine ake "zvachose uye vakatsunga rutsigiro."
Le Maire ichangopfuura akati, maererano ine shanduro:
"Ndakanga idzva makei, asi ikozvino ndava vaneshungu. Zvakanditorera gore. Ngatidzidzisei edu vomunyika kuti France pakutanga kuti blockchain uye crypto-unhu utsanzi mu Europe. "
Coinigy anotangazve chipeto inobva crypto wokutengesera Anwendung
Coinigy, gore-inobva cryptocurrency wokutengesera papuratifomu, akazivisa kushanda Coinigy Mobile, kuzvinyoresa-inobva Mobile cryptocurrency zvokutengeserana kushanda kuti iOS uye Android, kupa vatengi aine kuchikuva kuti kuchinjanisa kuburikidza anenge 20 exchanges vane date connectivity mhiri kupfuura 40 exchanges.
Kusiyana zvinenge zvose cryptocurrency zvokutengeserana platforms, ari Coinigy Mobile zvokutengeserana App rinoshanda muenzaniso chipeto apo vanoshandisa vanopiwa mukana kuchikuva uye ayo functionalities nokuda $21.95 pamwedzi.
Bitcoin kuchera midziyo mugadziri yeKenani mafaira for $ 1b IPO
Kenani Inc., chechipiri pakukura Muiti enyika migodhi Hardware bitcoin, pasi mumwe yataura chikumbiro kuna Hong Kong Stock Exchange, izvi zvingava zvikuru crypto kwenyika ukama IPO.
Kanani ndehwokuti kutanga kutengesa achangogara July, munhu ane zivo yacho akati, kukumbira kwete kuzvibatanidza nokuti mashoko ari private. The kambani, vachishandisa Hangzhou, kutengeswa 300,000 bitcoin kuchera rigs gore rakapera uye aiva kwemari pamusoro 1.3 bhiriyoni Currencykuva ($205M). Mumakore gore, mambure mari yakadirana zvinopfuura sixfold, maererano Chipiri raMwari pakunamata.
A dzokushandura yeKenani aizova wokutanga Hong Kong IPO kubva cryptocurrency indasitiri.
Social bhizimisi kuchikuva eToro kuti vomurova crypto Exchange muna US
eToro, pasocial bhizimisi pakakwirira, ari nezvekutanga munhu cryptocurrency Exchange uye Mobile chikwama, uye kuwedzera kupinda United States.
“Vatengi yose nyika inofanira kuwana zvokushandisa vanofanira kubatanidzwa mumisika cryptocurrency, zvisinei unyanzvi hwavo,” CEO Yoni Assia akati mupepanhau.
Top vatengesi cryptocurrency achakwanisa kuwana mari nokuita nemigove mumabhizimisi dzavo yakajeka pamusoro eToro uye nokubvumira mamwe vatengesi kutevedzera emaoko avo.
Kuchikuva ane 10 mamiriyoni vanoshandisa kubva 140 nyika, kubva China uye Russia kuSwitzerland uye United Kingdom.
Kunyange zvazvo pasina yekufamba yakapiwa nokuda apo cryptocurrency nzira vachava rinowanikwa muna U.S., eToro anoronga kupa cryptocurrency wokuita zvemusika ose chepasi munyika.
Azerbaijan nemitero kwemari kugamuchirwa mune cryptocurrency
Azerbaijan rinonetesa kwemari kugamuchirwa mune cryptocurrency, maererano Nijat Imanov, Mutevedzeri mukuru mukuru mutero nomutemo uye inokosha tsvakurudzo dhipatimendi nokuda Mitero Ushumiri, maererano nyika Trend News Agency.
Kana munhu anotenga cryptocurrency ndokuhutengesera nemutengo yakakwirira, mubereko Zvinonzi mari uye pasi mutero, Imanov akati, achihudana purofiti mutero kuti pamutemo masangano uye mari mutero vanhu.
South Korean mugari ...
Mastercard patents munhu ...